China Silicone (isina mvura) murwi wemamiriro ekunze mitsetse Kugadzira uye Fekitori |JYD
Silicone (isina mvura) inotutira mitsetse yemamiriro ekunze
Yakakura isina mvura uye anti-uv kuita
Base upamhi: 4 ~ 40mm
Murwi kureba: 3 ~ 7mm
1.Silicone mhando yemamiriro ekunze mitsetse ndeye silicone yakavharwa kuitira kuti idzore mvura uye inovimbisa kuramba kune UV mwaranzi.Hupenyu hwesevhisi hurefu.
2.Inoshandiswa pamahwindo & nemagonhi kuvandudza kushanda kwesimba nekuvhara maburi uye maburi anobvumira kunze kwemhepo kupinda, uye mukati meconditioned mweya kubuda.
3.High Quality Material - Yakagadzirwa nezvinhu zvakatipoteredza, bhurashi rakakora uye rakapfava, rakaderera friction, hapana ruzha, hapana deformation, ine kuramba kwakasimba.
4.Great performance: mukova wakanzwa chisimbiso jira rine zvinhu zvakawanda, zvakadai sokukwanisa kunzwika, guruva-uchapupu kukwanisa, uye kukwanisa kwemamiriro ekunze;Zvakare, iyi yegonhi yemamiriro ekunze seal strip inopesana nekudhumhana, uye inogona kuiswa pamagonhi egirazi kana mahwindo kuderedza kukuvadzwa kunokonzerwa nekudhumhana.
Ruvara: Dema, Gray, White, Brown
100-200m mumupumburu mumwe, 4-8rolls pa carton, 370 makatoni mune imwe 20ft mudziyo, 750 makatoni mune imwe 40ft mudziyo.
Delivery Delivery:10-18days mushure mekusimbisa kurongeka uye kubhadhara dhipoziti
Q: ODM uye OEM anogona kupiwa?
A: Hongu.Takapa.Akapfuura 200 makatoni, ndezvemahara.Kana huwandu husingapfuuri 200 makatoni, muripo unochajwa.Mushure mekunge 200 makatoni aunganidzwa, mutengo unobviswa kubva kune inotevera kurongeka.
Mubvunzo:Mazuva mangani auchapedza odha yangu?
A: Tine mafekitari mana.Saka isu tinogona kurega mafekitori mana kuti agadzire odha yako pamwechete.20GP mukati memazuva makumi maviri.40GP/40HQ mukati memazuva makumi matatu.
Mubvunzo: Unogona kupa muenzaniso here?
A: Hongu.Tinogona kupa sampuli yemahara.Kana isu tine saizi yakafanana mustock, tinokutumira saizi yaunoda uye mamwe masaizi atakakurudzira.Kana isu tisina saizi yakafanana mustock, tinokutumira saizi yakafanana kana mhando.Unogona kutarisa mhando kutanga.
Q: Ndeipi iyo shoma yekuodha huwandu?
A: Kana saizi iri saizi yenguva dzose, yakadai se5 * 6mm, 7 * 5mm nezvimwewo, MOQ ndeye 5,000m.Kana saizi isiri saizi yenguva dzose, senge 40 * 12mm nezvimwe, iyo MOQ ndeye 20,000m.
Zvakapfuura: JYD Fekitari Mutengo Window&wadhiropu Inonamira Yekuzvinamira Seals Weather Stripping
Zvinotevera: Silicone mhando
Kwete Silicone Pile Strip
Silicone Pile Strip
Silicone Wool Murwi Weather Strips
Mashinda eshinda akatwasuka
7 * 5mm puffy brush yekuisa chisimbiso mitsetse